Siyaasi Cali Guray Oo Dhaliilay TV qaranka iyo Idaacada, iyo Sababta oo uu sheegay, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Siyaasi Cali Guray Oo Dhaliilay TV qaranka iyo Idaacada, iyo Sababta...
Siyaasi Cali Guray Oo Dhaliilay TV qaranka iyo Idaacada, iyo Sababta oo uu sheegay,
Ah! waxan nacay Idaacadda iyo TVga Qaranka ee Somaliland. Waa waxa intaa ay jireen aan si hagar la’aan ah dadka uga haqab tirin xusuusta taariikhdii 60kii.
Iska daa wax kale eh caawa oo kale ma waxay garan waayeen Xamar heesihii Walaalo Hargeysa hadii ay badh ku dabaaldegeen idinkuna dhinaca kale dadkiina wax ka tusa oo barnaamijyo taxane ah ka diyaariya.
Waar ma waxay garan waayeen wax kaleba iska daayoo heestii Xuseen Aw Faarax ee (Allow sahal amuuraha adaa noo aqoonee) Tvga iyo Idaacadaba ka saara. Dadka Somaliland maxaa loogu bedelay kalgacalkii iyo wanaagii iyo jacaylkii ay u qabeen midnimo soomaaliyeedee wax walba ay u hureen.
Saw inta lala yaabay dad aan waxba doonayn inta laga soo qaaday SOOMAALI QALDAAN lama odhan. Abaalka iyo wanaaga loo galo dar aan geyin baa sidaas ah. Ilaa maanta ayaanay xumaan mooyee wanaag waxba ku lahayn oo caqligoodu yahay kaalay sidii hore ayaa fiicnayde.
Saxardiid Maxamed maalin BBCdu wax ka waydiisay habeenkii calanka la saarayay heesihii munaasibadda loogu talogalay markuu sedex heesood oo isaga, iyo Xuseen Aw Faarax, iyo Cali Sugulle ay kala lahaayeen sheegay ayuu weriyihi waydiiyay ” hadda midnimadii ka waran? Wuxu ugu jawaabay 61lii baan sheegay. Oo maxaad ka tidhi?
ADOO GURI BARWAAQA AH
GEEL DHALAY KU HAYSTA
GEEDI LAMA LALABO OO
ABAAR LOOMA GUUREE
WIXII ILA GARAADOW
GOBANIMO HA TUURINA
Waa sanadguuradii koobaad eh ka warran. Sanad ka horena waa kii lahaa
AAN MAALO HASHEENA MAANDEEQ
KADEEDKII KA BAXNOO
KULMIYAA LA SUDHEE
KADABAA DHEHA EEY
Kas daradooda lixdan sanadood baa ka soo warwegtay weli ismay waydiinin waar maxaa qaldamay ee sanad keliya intaa kala wareejiyay dadkii iyagu soomaalininadaba isu fideeyay ee qaranimadoodii u loogay? Imay waydiinin mana laha garashadii ay isku waydiin lahaayeen? Laakiin waxa ina hoojisay warbaahinta qaranka ee 27kii sanadood taariikhdii ummaddan oo dhan ka yaqaan 1988kii dayuuradihi Hargeysa garaacay, xasuuqii iyo xabaal-wadareed, iyo qaxii iyo hoogii dhacay een garanayn in wixii lixdankii qaldamay uu waxaas oo dhan sabab u ahaa. Saw markaa dadku inay fahmaan maxaa qaldamay oo dooda laga diyaariyo barnaamijyo laga diyaariyo xataa suugaan faneedka iyaga (Somaliland) ku abtirsada ay dib u wada diiwaangeliyaan oo ay sugaan macluumaadkooda oo dhan mahaa. Nasiibdarrada jirta kuwii goobjooga ahaa ama iyaguba halabuurka heesan lixdankii lahaa ayaa la jooga oo maalinba mid xabaalaha lagu daraa. Hadda kii ugu dambeeyay baa hadhay oo Idaacadda la jooga oo hareeraha laga dhaaf dhaafaa.
Oo maxaanse ula yaabi dhalinyarada hawshan aniga iyo dhigayga ayaa baylihiyaye
Previous articleDeg Deg, Madaxwayne Biixi oo Kukan La Qaatay Gudoomiyayaasha Maxkamadaha Gobalada Somaliland ,Maxayse kawada hadleen
Next articleGudoomiyaha Xisbiga Ucid oo Shirka Caalamiga ah ee Geneva ka Jeediyay Qudbad Taariikhda Somaliland ah